About Us Corporate Profile Corporate Governance Sustainability Management Reporting
Education Retail Sales Distribution Enterprise Solutions
CSR Media Mr KMD & Miss KMD for 2020
ASEAN Business Awards 2021 - Priority Integration Sector (ICT) Award Winner
KMD Company Limited was named the winner of the distinguished award - "Priority Integration Sector (ICT)" as part of the annual prestigious ASEAN Business Awards 2021 (ABA 2021). The award winners were announced during the ABA 2021 Virtual Awarding Ceremony on the 30th of November 2021. The ASEAN Business Awards were launched in 2007 by the ASEAN Business Advisory Council to give recognition to enterprises that have contributed to the growth and prosperity of the ASEAN economy. The Priority Integration Sector Award recognizes outstanding performance amongst 10 ASEAN Economic Community Priority Integration Sectors, promotes the sectors and makes ASEANamore prominent segment of the world economy while also encouraging regional cohesiveness and global competitiveness. The 10 priority sectors are:
For more information: https://www.aseanbacbrunei.com.bn/aba/awards-and-categories
Enterprise Resource Planning (ERP) Software ကိုအဓိက ပံ့ပိုးပေးသည့် 𝐒𝐀𝐏 𝐄𝐱𝐚𝐦 များကို KMD Exam Center တွင်ဖြေဆိုလို့ရနေပါပြီ...
Exam ဖြေဆိုရန်အတွက် Individual rooms, Exam Requirements နှင့် ကိုက်ညီသော computer, ကောင်းမွန်သော Internet, လိုအပ်တဲ့ Headphone, Webcam စတာတွေကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုပဲ ဖုန်းလေးဆက်ရုံဖြင့် booking ကြိုယူနိုင်ပါတယ် Hotline Phone - 09449489511 Page Messenger ကနေလည်း booking တင်လို့ရပါတယ်ရှင် လူကြီမင်းတို့ အနေဖြင့် Exam ကိုသာ အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်နိုင်အောင် ၊ ဖြေဆိုဖို့ လိုအပ်ချက်တွေကို KMD Exam Center မှ ကူညီပေးပါရစေ...
𝗣𝗲𝗮𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 (𝗣𝗧𝗘 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹) 𝗘𝘅𝗮𝗺
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု English Proficiency test ဖြစ်သည့် 𝗣𝗲𝗮𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 (𝗣𝗧𝗘 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹) 𝗘𝘅𝗮𝗺 ဖြေဆိုရန် KMD - Pearson VUE Authorized Test Center မှ ကူညီပေးပါရစေ... Exam ဖြေဆိုနေချိန်တွင် မီးပျက်မှာ၊ Internet လိုင်းကျမှာ၊ Computer အဆင်မပြေဖြစ်မှာ စတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ အတွက် စိတ်ရှုပ်မခံပါနဲ့၊ စာမေးပွဲကိုသာ အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်လို့ရအောင် Exam ဖြေဆိုရာတွင် လိုအပ်တဲ့
✪ တိတ်ဆိတ်သော အခန်း
✪ ကောင်းမွန်သော Internet
✪ Exam Requirement နဲ့ ကိုက်ညီသော Computer
✪ Exam မဖြေဆိုခင် သတိထားရမည့်အချက်များ
✪ Exam ဖြေဆိုနေချိန်တွင် လိုက်နာရမည့် အချက်များ နှင့် Exam Check in ဝင်တဲ့ အထိ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး ပါတယ်။
Exam ဖြေဆိုသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဖြေဆိုနိုင်ရန် ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း စီမံပေးထားပါတယ်... 🏠 Test Center ၏ တည်နေရာသည် အမှတ် ၃၃၁၊ ပြည်လမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် (မဟာမြိုင်ကားမှတ်တိုင် အနီးရှိ) KMD Myaynigone Campus တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ⏱ Exam များကို မနက်(၉)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီ အတွင်းဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ☎️ Exam များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်ကို Phone နှင့် Viber နံပါတ် ၀၉-၄၄၉၄၈၉၅၁၁ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
(၂၅) ကြိမ်မြောက် KMD Group of Companies ၏ စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် အလှူတော် မင်္ဂလာ
(၂၅) ကြိမ်မြောက် KMD Group of Companies ၏ စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် အလှူတော် မင်္ဂလာကို၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၈ ရက် ၊ နံနက် ၉:၀ဝ နာရီ တွင် လယ်တီမူဝိပဿနာကမ္မဌာန်း ကျောင်းတိုက်တွင် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပြီး တရားနာယူ၍ အောင်မြင်စွာ ရေစက်သွန်းချလှူဒါန်း ခဲ့ပါသည်။
စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူတော်တွင် ငွေသားတန်ဖိုး ( 2,016,000 ) ကျပ်၊ ပစ္စည်းတန်ဖိုး (199,900) ကျပ် ၊ ဆွမ်းအလှူတော် နှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးအတွက် (209,000 ) ကျပ်၊ အားလုံးအတွက် စုစုပေါင်း လှူဒါန်းငွေ ( 2,424,900 ) ကျပ် တိတိ ကို ရေစက်သွန်းချလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Copyright © 2021, KMD. All Rights Reserved.